Good राम्रो ब्रान्डि jobs रोजगारीको चयन क्रिएटिव अनलाइन
प्रत्येक चोटि अब हामीले हेर्नुपर्नेछ र छिमेकीले के गरिरहेछ भनेर। हेर्न, विश्लेषण गर्न, सिक्न र सोच्नुहोस् हामी कसरी यसलाई सुधार गर्ने छौं। यो एक राम्रो व्यायाम हो जससँग हामी सजिलो पार्नेछौं जब यो आउँदछ दृश्य पहिचान पोज गर्नुहोस्.
यहाँ को एक चयन छ Bra ब्रान्डि jobs रोजगारहरू संक्षिप्त विवरण सहित। म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ र ती सबै भन्दा माथि, तिनीहरूले तपाईंलाई प्रेरित गर्दछन्।
Bra ब्रान्डि jobs कार्यहरू
ट्यान्जेन्ट क्याफे, पाँचौं हजार औंलाहरु द्वारा डिजाइन।
ट्यान्जेन्ट क्याफे भ्याकुभरमा अवस्थित छिमेकी बार-रेस्टुरेन्ट हो। ज्याज प्रदर्शन यसमा लिन्छ, यसको मुख्य विशेषता घर खाना पकाउन र एक चयन शिल्प बियर हो। यस परियोजनाको चुनौती भनेको एक स्वागत योग्य ठाउँ सिर्जना गर्नु थियो जुन विश्वासले उत्पन्न गरेको थियो, स्थानले दिएको चंचल प्रतिष्ठालाई समेकित गर्न।
डिजाइनरहरूले मालिकहरूसँग नजिकबाट काम गरे यस परिसरको नयाँ ब्रान्डको विकास गर्न, एक दृश्य पहिचान जसले मालिकहरूले प्राप्त गर्न चाहेको आरामदायक सामाजिक वातावरण प्रतिनिधित्व गर्दछ।
र freshको संयोजनको साथ एक ताजा छवि स्थानको प्रकृति (पहेलो?) दिएर ध्यान आकर्षित गर्दछ। टाइपोग्राफी, अति उत्तम।
ब्रोक्स, डेनियल ब्रोक्स Nordmo द्वारा डिजाइन।
यो ग्राफिक डिजाइनर आफैंको दृश्य पहिचान हो। यो सबै मसँग पुरानो नोटबुकमा रहेको थुप्रै स्केचहरू मिक्स गर्ने विचारको साथ आएको थियो र ती सम्पूर्ण दृश्यहरू स्वच्छ थिए। केही स्केचहरू प्रिन्टको रूपमा प्रयोग गरियो र अरू चित्रको रूपमा।
यहाँ के गर्छौं बिभिन्न आँखाले हेर्नुको महत्व प्रदर्शन हुन्छ। नोटबुकमा केहि बिर्सिएका स्केचहरूले एक निर्दोष र धेरै उल्लेखनीय दृश्य पहिचानलाई जन्म दिए।
बेलन जोन्स्टन द्वारा डिजाइन, Dylan Culhane को लागी पहिचान
यस नयाँ व्यक्तिगत पहिचानको लागि संक्षिप्त जानकारी फोटोग्राफरको बिभिन्न र विविध शैलीको साथ पेशेवर स्टेशनरीको एक सुसंगत छवि सिर्जना गर्नु थियो, जसले पहिलो दृष्टिमा ध्यान आकर्षित गर्नु पर्ने थियो। मुख्य विचार भनेको सचेतता र वृत्तिको विपरित अवधारणाहरूलाई मिलाउन थियो, डिलनको कामका आधारभूत स्तम्भहरू। प्रस्तावले एक मोडुलर प्रणाली प्रस्तुत गर्‍यो जुन परियोजना वा ग्राहकको अनुसार अनुकूलित हुन सक्दछ। लोगोमा धेरै तत्वहरू छन् जुन संचार, मार्केटि and र अनुकूलन प्याकेजि options विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई अनुमति दिन्छ।
मलाई यो पहेंलो र color छनौट गर्न गाह्रो लाग्छ जुन निन्दित हुँदैन। यो सहि हो।
एम्पोरियम फीट, फाउन्ड्रीको द्वारा डिजाइन
एम्पोरियम पाइज बुटीक बेकरी हो। ब्रान्ड डिजाइनरहरू द्वारा केकको गुणवत्ता प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले सिर्जना गरिएको थियो।
मलाई मन पर्छ कि उनीहरूले कसरी परिचयलाई फूलहरू उपयोग गरे।
मिहान प्याटरसनले डिजाइन गरेको अग्री जोन्सका लागि परिचय
Augie जोन्स एक विशेष चीज हो। पहिचान उच्च उत्पादन को, यसको उत्पादनहरु को दर्शाउँछ। लोगो एक हस्तनिर्मित टाइपफेसमा आधारित छ, जसले कम्पनीको प्राकृतिक भावना प्रदान गर्दछ। यो अवधारणा पनि प्रयोग गरिएको र p प्यालेट द्वारा प्रबल गरिएको छ: तटस्थ टोनहरू।
मलाई लाग्छ तपाईंले अहिले नै अनुमान लगाउनुभएको छ, तर ... मलाई लोगो मन पर्छ। म तिनीहरूका चीजहरू किन्नेछु।
एनिमप पहिचान, इजाबेला रोड्रिग्स द्वारा डिजाइन
एनिमप एक अडियोभिजुअल उत्पादन कम्पनी हो जसको उद्देश्य स्टार्टअपहरू हुन्छन्। यो नयाँ, आधुनिक, रमणीय छ। ब्रान्डको पहिचानलाई ती सुविधाहरू दिन ईसाबेलाले अर्को, थप शक्तिशाली तत्व सिर्जना गर्न छवि पुनर्निर्माण गर्‍यो। अधिक स्पष्ट र escape्गबाट ​​उम्कन, १ 60 s० को दशकमा विशिष्ट र colors्गहरूको चयन छानियो।
रंगहरूको शानदार चयन, सही?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » Good राम्रो ब्रान्डि jobs रोजगारहरूको चयन